ဖင်လန်နိုင်ငံ (၁ဝ၁)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဖင်လန်နိုင်ငံ (၁ဝ၁)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဖင်လန်နိုင်ငံ (၁ဝ၁)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ
ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ (၁ဝ၁) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ Sule Shangri-La ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အခမ်းအနားမှာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Riikka Johanna Laatu တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအခမ်းအနားမှာ ဖင်လန်နိုင်ငံ မသန်စွမ်းအဖွဲ့ရဲ့ သရုပ်ပြဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကို ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံခြားသံရုံးက သံအမတ်ကြီးတွေ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံတွေ၊ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖိတ်ကြားထားသူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖငျလနျနိုငျငံ (၁ဝ၁)နှဈမွောကျ လှတျလပျရေးနေ့ အထိမျးအမှတျ အခမျးအနား ကငျြးပ
ဖငျလနျနိုငျငံရဲ့ (၁ဝ၁) နှဈမွောကျ လှတျလပျရေးနေ့ အထိမျးအမှတျအခမျးအနားကို ဒီဇငျဘာလ ၅ ရကျနေ့ ရနျကုနျမွို့ Sule Shangri-La ဟိုတယျမှာ ကငျြးပခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ အခမျးအနားမှာ စီးပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာ သနျးမွငျ့နဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖငျလနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Ms. Riikka Johanna Laatu တို့ တကျရောကျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီအခမျးအနားမှာ ဖငျလနျနိုငျငံ မသနျစှမျးအဖှဲ့ရဲ့ သရုပျပွဖြျောဖွတေငျဆကျမှုကို ကွညျ့ရှုအားပေးခဲ့ကွပွီး ရနျကုနျမွို့ နိုငျငံခွားသံရုံးက သံအမတျကွီးတှေ သံရုံးယာယီတာဝနျခံတှေ၊ ကုလသမဂ်ဂ ဆိုငျရာ ဌာနကေိုယျစားလှယျတှနေဲ့ ဖိတျကွားထားသူတှေ တကျရောကျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
Previous articleဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုရဲ့ ဘင်္ဂါလီဆိုင်ရာ မှတ်ချက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကန့်ကွက်
Next articleဦးစိုးလင်းဟန် ကို လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ပူးတွဲခန့်အပ်